Fipoahana tetsy Mahamasina: hanamafy ny fisafoana mpitandro filaminana | NewsMada
Fipoahana tetsy Mahamasina: hanamafy ny fisafoana mpitandro filaminana
Eo am-panaovana fanadihadiana sy fikarohana, mikasika ireo fipoahana, tetsy Mahamasina ny alin’ny zoma teo, sy teny Ankadindramamy ny zandary amin’izao fotoana izao. Mbola tsy fantatra na baomba na grenady ireo napoaka. Nilaza hanamafy ny fisafoana eto an-drenivohitra ny zandary.
“Tsy mbola fantatra mazava na grenady na baomba artizanaly ireo nipoaka teny Mahamasina sy teny Ambohidahy Ankadindramamy. Anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao”, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny zandarimaria, kaomanda Andrinarisaona Herilalatina. Nampitomboina avy hatrany kosa ny isan’ny mpitandro filaminana manao ny fisafoana mba hisorohana ny fiverenan’ny trangan-javatra tahaka ireny. “Hamafisina ihany koa ny fanangonam-baovao. Ilaina ny fitoniana”, hoy ny fanazavana.
Tsy nisy ny olona naratra fa ny fahasimban-javatra kosa no betsaka tamin’ireo toerana roa ireo. “Samy naheno io fipoahana mafy io ny zoma alina. Ny zandary avy eny amin’ny CIRGN Ankadilalana avy hatrany dia nidina teny Mahamasina”, hoy ny fanazavana.
Tao amin’ny kianjan’ny kanto ny fipoahana iray izay nanimba ireo seza biriky sy fipetrahana maromaro. Tsy tany anaty trano kosa fa teo amin’ny vodina tongon-davarangana ny teny amin’ny tranon’ny depiote Raholdina. Tsy nisy ny olona naratra fa ny rindrina kosa no nisy fahasimbana.
Nihodinkodina ny mpitandro filaminana
Tazana tamin’ny faritra maromaro teto an-drenivohitra ny mpitandro filaminana nirongo basy. Nisy ihany koa ny fihetsiketsehana nataona andian’olona teny anoloan’ny HCC ka efa niandriandry teny ny Emmo/Reg.
Andrasana raha hisy vokany haingana tokoa ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana manodidina itony resaka baomba sy grenady itony. Rehefa mafana ny resa-politika eto amintsika, mivoaka ny grenady sy ny baomba. Mampahatsiaro ny zava-nitranga tamin’ny andron’ny tetezamita. Mbola misy tsy maty voaloavo an-kibo ny mpanao baomba tamin’ireny fotoana ireny?